Ny vokatra mpankafy malaza momba ny rano Humidifier Water Spray Mist China Manufacturer
Description:Fanenan'ny rano mpankafy Fan Air Humidifier,Fanatanjahantena rivotra,Air Humidifier Mist
Home > Products > Home Humidifier > Ny vokatra mpankafy malaza momba ny rano Humidifier Water Spray Mist
Model No.: DT-168G
6 Jiro LED hisafidianana: ny loko 7 miova & Jiro mafana.
Multifunction: diffuser ny hanitra manitra dia ny Aromaterapy diffuser, ny rivotra Humidifier, ny Air Purifier, ny rivotra Airizer ary ny hazavana amin'ny alina.
Ultrasonic Humidifier: ADVANCED Ultrasonic diffusing teknôlôjia izay mamokatra vovoka amin'ny alàlan'ny 2.4 tapitrisa tapitrisa isaky ny segondra manaparitaka ny rano sy ny menaka manan-danja ho singa-micro tena tsara tsy mampiasa hafanana (manova ny hafanana ary manapotika ny fananan'ny menaka ilaina). Ny endri-pandrika ULTRASONIC dia miantoka ny fahatokiana ny rafitra molekiola mahasoa ao anaty menaka ilaina ary manome fahafaham-po ny fidiran'ny vatana mahasalama.
Lehibe 500ml capacity Aroma Humidifier: lehibe rano 500ml izay afaka manohy mampiasa hatramin'ny 12 ora isak'izay. Rehefa tonga ny fotoana na tsy misy rano, dia hiato ho azy ny lozisialy menaka esensial. Tsindrio ny bokotra "Mist", safidio ny 60 min, 120 mins, 180 mins na ON.
Tombontsoa isan-karazany: Ny fanamandoan-trano dia manatsara ny kalitao rivotra, mamelombelona ny rivotra iainana, mampihena ny alikaola, miasa toy ny ionizer amin'ny alàlan'ny famoahana ireo otrik'aretina ratsy amin'ny rivotra mba hiadiana amin'ny sela miabo manimba. Ny tombotsoany dia misy ny fananganana fikojakojana fanatsarana, fanamafisana ny hery fiarovana. Ny aromaterapy dia manampy amin'ny fanadiovana rivotra, hampiakatra ny sainao ary hanamaivana ny adin-tsaina. Rehefa ampiasaina ho toy ny humidifier-non-aromaterapy dia manome hamandoana ho an'ny kohaka maina, aretin-kibo, ary hoditra maina.
Fanamorana Fandrafetana ambany indrindra ho an'ny tranonao Contact Now
Resin Material Humidifier ho an'ny efitra fatoriana Contact Now
Ny fiovana lehibe indrindra Vola miovaova Humidifier ho an'ny efitrano zazakely Contact Now
Ny efitrano feno rano azo tsidihina feno fahaiza-manintona Contact Now
700ML Tranon-tsolika feno Humidifier Fahasarotana lehibe Contact Now
2020 Vaovao Vaovao Ho an'ny famolavolana fakana sary vaovao voalohany Humidifier Contact Now
Fanenan'ny rano mpankafy Fan Air Humidifier Fanatanjahantena rivotra Air Humidifier Mist Efitranon'ny ankizy Humidifier Famerenan'ny famerenana Humidifier Smart Rivotra ho an'ny Air Humidifier Mpankafy Mini Humidifier Feno trano Ultrasonic Humidifier